October | 2007 | Layma's World
A Dancer’s Wish
Posted on October 31, 2007 by layma
“ ကချေသည်ရဲ့ ဆန္ဒ…”
မှတ်ချက်= ကံဇာတ်ဆရာ နှင့် ကချေသည် လူသား
Posted on October 28, 2007 by layma
ကြွားရဦးမယ်ကွဲ့ … ကြွားရဦးမယ်…
တကယ်တော့ ဒီပြသနာက ၀ါကျွတ်လို့ ရှုပ်ကုန်တာ … ရှုပ်တော့လည်း ရှင်းရတော့မှာပေါ့လေ…။ အရင်ကတော့ လေးမ ရှင်းလင်းပွဲ ဆိုပြီး ရှင်းလင်းပွဲတွေ လုပ်နေကြပါ … ။ ဒါပေမယ့် ခုတလော ရှင်းလင်းပွဲက သိပ်ခေတ်မစားတော့ဘူး … ဒါကြောင့် ပြောချင်တာကိုပြောပြီး ဘလော့ခ်မှာ သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်…။
ဒီသီတင်းကျွတ်မှာ လေးမ တော်တော် ပြသနာတက်သွားပါတယ်…။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ … သူတို့ တွေကလေ… လေးမ ကို လာလာစ သွားကြတယ်…။ ဘလော့ခ်ဂါ အပျိုကြီး လို့ အော်သွားတဲ့သူလည်းရှိတယ်…။ အရန်လုပ်ဖို့ လျှောက်လွှာတင်တဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်…။ ဆီပုံးမှာ ပြန်ဖြေထားတာကိုလည်း မဖတ်ကြဘူး …။ ဟွန်း…ဟွန်း… လေးမ ကိုများ … showroom ထဲမှာ ဖုန်သုတ်နေရတဲ့ ပစ္စည်းများ မှတ်နေသလား မသိဘူး …( အပျိုကြီးမမတွေ စိတ်ချိုးကြနဲ့ နော်… လေးမ က သူတို့ကို ရန်တွေ့ ချင်လို့ပါ…) ။ လေးမက ပိုင်ရှင်မဲ့ မဟုတ်ဘူးရှင့် … ။ လေးမမှာ ပိုင်ရှင်ရှိတယ် … လေးမမှာ ကောင်းကင် ရှိတယ် …လေးမမှာ အိမ်ရှိတယ်… ။ ဒါပေမယ့် လေးမမှာ ကိုစိုးထက်တို့ … ကိုအန်ဒီတို့လို ကြွားစရာ ရတနာလေး မရှိဘူး…။ ဒါကြောင့် တိတ်တိတ်လေး … ကုတ်ကုတ်လေး နေခဲ့တာ …။ ခုတော့ … အတွေးမှား…အမြင်မှား… အရေးမှားလျှင်..သမိုင်းနွံနစ်မည်..အဲ…အဲ…ဟုတ်ပါဘူး…. ယောင်လို့ … ဘော်ဘော်တွေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိထားရအောင်… ရှိစုမဲ့စုလေးကို ထုတ်ကြွားလိုက်ပါပြီရှင် … ။ ။
မှတ်ချက် ။ ။ လေးမရဲ့ ဒုတိယအသက်က … “အရောင်များ” ထဲက လေးမ အရောင်ဖတ်ခဲ့တဲ့…ကောင်းကင် …၊ “လေးမနှင့် ကောင်းကင် ” ကဗျာမှာ ကင်းကောင်ကြီး လို့ ဘော်ဘော်တွေ စသွားတဲ့ ကောင်းကင် … ၊ “တန်ဆောင်တိုင်အိပ်မက်” ကိုအတူမက်ခဲ့တဲ့ ကောင်းကင် ကြီးပါရှင် …..။ လေးမ စောစောကတည်းက မကြော်ငြာထားမိတာ ခွင့်လွှတ်ကြပါလို့ အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်ရှင် … ။ မလိုဘူးထင်လို့ပါရှင် ….။
Filed under: Personal, That's what I wanna say |	15 Comments »
Posted on October 25, 2007 by layma
အိမ်အပြန်လမ်းတလျှောက်မှာ ဆိုင်လေးတွေ ၊ အိမ်လေးတွေ မီးတွေထွန်းလို့လေ… ။
Filed under: Seasonal Post |	4 Comments »
Who have been visited ?
Posted on October 24, 2007 by layma
Who are you ? Let me know your name …
Pls leave your message and link …
လေးမ အိမ်အသစ် ၀ယ်လိုက်တယ်…။
နေရာလေးက သန့်ပါတယ်…။ လေးမ ၀ယ်လိုက်တာ WordPress Housing Estate မှာလေ…။ အိမ်ရာဆိုတော့ အိမ်တွေက ဆင်တူတွေများတယ် …။ အိမ်ကို သိပ်ပြင်လို့မရဘူး … ခွင့်မပြုဘူးပေါ့ …။ လေးမ က လူသစ်ဆိုတော့ လူလည် မလုပ်တတ်သေးတာလဲ ပါတာပေါ့ … နောက်ပိုင်းတော့ လေးမ နည်းနည်းပါးပါး စာတတ်သွားရင်တော့ ညှိစရာရှိတာလေးတွေ ညှိပြီး အိမ်ကိုပြင်ကြည့်ရမယ် …။ တကယ်တော့ အိမ်က ပြင်စရာကို မလိုတာ … အားလုံးအဆင်သင့်ပဲ … အသင့်ယူသုံးလိုက်ရုံပဲ … ။ ဒါပေမယ့် ဗိသုကာဆိုတော့ နည်းနည်းပါးပါးတော့ ဆည်းပူးထားသည့်ပညာ မနေသာ ဆိုသလို ဟိုနားဒီနားလေးတွေတော့ ပြင်ကြည့်ချင်သေးတယ် …။ လောလောဆယ် ၀ယ်လိုက်တဲ့ အိမ်ဒီဇိုင်းက ချဲ့ လို့ … ကျဉ်းလို့မရဘူး … ။ စာတိုက်ပုံး ( cbox) ထည့်လို့မရဘူး …။ ပို့စ်တွေတော့ စိတ်တိုင်းကျ နေရာချ … ဒီဇိုင်းဆွဲလို့ရသွားပြီ … ။ အိမ်သစ်တက်ပွဲတော့ မလုပ်သေးဘူး … ။ သီတင်းကျွတ်ပြီးမှပဲ လုပ်တော့မယ် …။ လောလောဆယ်ဆယ် ဒီက ပစ္စည်းတွေကို ပြင်သင့်တာပြင်ပြီး နေရာချနေတယ်…။ သူငယ်ချင်းတို့ လမ်းကြုံရင် ၀င်ခဲ့ကြလေ …။ လိပ်စာက wordpress.com…ပါ … laynge လို့ မေးလိုက်ရင် သိကြပါတယ်…။ သူငယ်ချင်းတို့လဲ စိတ်ဝင်စားရင်ပြောင်းခဲ့ကြလေ … သီတင်းကျွတ်ဆိုတော့ promotion ရှိချင်ရှိမှာ …။ လေးမကတော့ အစောကြီးထဲက ၀ယ်ထားလို့ discount မရလိုက်ဘူး … ။ နောက်မှ အိမ်သစ်တက်ပွဲ လုပ်ပြီး မုန့် ကျွေးမယ်နော် … ။ ။
P.s. အိမ်ပြောင်းသွားပေမယ့် Blogspot နိုင်ငံသားအဖြစ်လည်း ဆက်လက် ခံယူထားဆဲပဲ … ။
Filed under: That's what I wanna say |	6 Comments »
Posted on October 22, 2007 by layma
လေးမ သိတဲ့ …. Blog ကို တွယ်တာနေသူ အချို့ ဟာ …အပြင်လောကမှာ စကားနည်းကြတဲ့ အေးတိအေးစက်သမားတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်…။ ဘယ်သူတွေလဲ သိလား…။
၆။ ကိုပီကေ (ကိုမျက်လုံးနှင့် မမယ်လိုဒီမောင် ကိုသက်သေထားပြီး အဆိုပြုလာသူ…)
ရ။ အနိုင် ( သတိ…သူ့ ထံသွားလျှင် မည်သည့်စားစရာမှ ယူမသွားရ… အန္တရာယ်ရှိသည်… စကားနည်းသော်လည်း အစားမနည်းပါတဲ့..)
၈။ ကိုရန်အောင် ( ကိုးန၀င်းစိပ်နေတဲ့ အချိန်ဆိုရင် လုံးဝ စကားမပြောဘူး …)
၉။ sparrow (စာကလေးကတော့ စကားကိုပြောချင်ပြောမယ်…မပြောချင်မပြောဘူးဆိုတဲ့ လူမျိုး…မွေးသမိခင်နဲ့ တောင် တနေ့ငါးခွန်းပြည့်အောင် မပြောဘူး …တဲ့..)
၁၀။ ဂျယ်ရီ ( တစ်နေ့လုံးနေမှ …တစ်ခွန်း … အဲဒီတစ်ခွန်းမှာ စကားလုံးရေ ၅ သောင်းတဲ့ … သူကတော့ အေးစက်စက်ဟုတ်ဘူးတဲ့…နွေးနွးထွေးထွေးတဲ့ ( ကောင်မလေးတွေကိုနေမှာပေါ့)
၁၁။ မခွန်မြလှိုင် ( အိမ်ကလူနဲ့ တောင် စကားသိပ် မပြောဖြစ်ဘူး.. ဟိ.. ရန်တိုက် ပေးတာ.. ဟုတ်လား..သိဘူး…)
၁၂။ မညလေး ( ကိုကျော်ကလွဲရင် ဘယ်သူနဲ့ မှ သိပ်မပြောဘူး.. ကိုကျော် ကိုတောင် မတတ်သာလို့ ပြောနေရတာ… သွယ်ရေ.. ဂျီတော့ကိုလာပါ..လာပါ နဲ့ လာလာအော် လွန်းလို့ သနားလို့…)
သူတို့ အထီးကျန် … အဖော်မဲ့နေခြင်းမဟုတ်ပါ… အပေါင်းအသင်းများနှင့် လုံးထွေး လျှောက်လည်ခြင်းကို မခုံမင်သူများ…၊ ပါးစပ်က ထွက်စရာ စကားလုံးရှားပါးသူများ …၊ တကိုယ်တည်း တွေးနေရတာကို နှစ်သက်သူများ ဖြစ်နိုင်ပါသည် …။ သူတို့သည် အသံတိတ် ကမ္ဘာလေးထဲတွင် ဆူညံစွာ စကားပြောနေကြသည် …။ စကားပြောလိုသောကြောင့် ပြောနေကြခြင်း မဟုတ်ပါ…။ သူတို့နှင့် အပေါင်းအဖော်များ ရေးသားသော စာသားများ၏ စေ့ဆော်မှုကြောင့် နှုတ်ခွန်းဆက် …ဆုတောင်း… အကြံပေး … ဝေဖန် …လေကန်… ရန်တွေ့ …ကျီစယ်သော စကားလုံးများ… အလုအယက် တိုးထွက်လာကြသည် …။ ထိုအခါ စကားပြောဖို့တောင် အချိန်မလုံလောက်တော့ …။ ။
( ဟောကြည့် …. ပြောရင်းဆိုရင်းတောင် ပို့စ်တစ်ပုဒ်စာ ပြောမိသွားပြီ… )
မှတ်ချက် ။ ။ မမှန်လျှင် နာမည်ပြန်ဖျက်ပေးပါမည်…(သက်သေအထောက်အထား ခိုင်လုံရမည်) ။ထပ်မံ စာရင်းပေးလိုသူများ ကိုလည်း ထပ်ဖြည့်ပေးပါမည်(သက်သေ အထောက်အထား ခိုင်လုံရန်မလို) …။
ကိုမျှားပြာရေးတဲ့ “တစ်မိုးတည်းအောက်” ကဗျာရဲ့ ကွန်မန့် မှာ လေးမ ၀င်ရေးခဲ့တာပါ..။ မျှားပြာက ဘလော့ဂ်မှာပြန်တင်ပေးပါတယ်…။ အခု သူမသိအောင် တိတ်တိတ်လေး ပြန်ခိုးလာတာပါ…။ ရှူး…သွားမပြောနဲ့နော်…။ ။